Ogaden News Agency (ONA) – Xubno ka socda Jaaliyada S.Ogadeniya ee Norway oo ka qaybgalay shir ka dhacay Waaxda Is-dhexgalka Dadyawga kala Duwan ee ku Dhaqan Norway
Xubno ka socda Jaaliyada S.Ogadeniya ee Norway oo ka qaybgalay shir ka dhacay Waaxda Is-dhexgalka Dadyawga kala Duwan ee ku Dhaqan Norway
Posted by ONA Admin	/ May 9, 2015
Jaaliyada Soomalida Ogadeniya oy matalayaan Gudoomiyaha jaaliyda Mudane: khalif Abdi Ali iyo Maxamed Yusuf Mahad oo ka socday O.Y.S.U Norway ayaa ka qaybfalay shir ka dhacay Waaxda Is-dhexgalka shucuubta kala duwan eek u nool dalka Norway.
Gudoomiyuhu wuxuu halkas ku gudbiyay warbixin faahfaahsan oo ka hadlaysa waxqabadka jaaliyada soomaalida Ogadeniya, aad ayaana loo soo dhaweeyay. waxaana halkaas gudoomiyuhu ugu fidiyay martiqaad ururadii kale ee kasoo qayb galay shirkaas.
Waxaa shirkaas lagu qaada dhigay arimo khuseeya isdhexgalka dhaqamada kala duwan, waxaana kasoo qayb galey ku dhawaad 20 urur oo si rasmi ah uga diiwaan gashan wadanka Norway qabtana hawlo badan iyagoo wadaagay fikirado iyo talooyin fara badan oo wax tar u ah bulshooyinka kala duwan.
Shirkan wuxuu hor dhac u yahay shir wayn oo la qaban doono bisha october ee soo socota insha alah oo ay kasoo qayb gali doonan masuuliyinta ugu saraysa wadanka Norway kaas oo si wayn loogaga hadli doono sidii loo horumari lahaa waxqabadka ururada wadanka ka dhisan si ay u horumarin lahayeen bulshooyinkooda uguna xidhi lahyeen bulshada kale ee Norway.
Kulanka waxaa isku soo duba riday, maanta oo habsami u socodkiisa daadihinayay Adviser. Lisa Hartmark iyo Mr. Henrik Cafer Cenar .. Shirkaas ayaa wuxuu kusoo dhamaaday jawi farxad iyo guul ah.